स्वास्थ्य समाचार अपडेट - Page 30 of 106 - Koshi Online
किन आउछ गिजाबाट रगत ? जान्नुस यसको कारण
५ असार २०७४, सोमबार १६:०४
एजेन्सी, असार ५ बिहानै उठ्दा मुखमा रगत आइरहेको हुन सक्छ । यही कारण मानिस दिनभरि चिन्तित हुनुपर्छ । ब्रस गर्दा रगत देखिएपछि कतिपय मानिस त रगत सिधिन्छ वा रोग लाग्छ भनी कैयौं दिन दाँत सफा गर्दैनन् रे । केहीले खाना चपाउँदा वा साह्रो चिज खाँदा…
यस्तो हुन्छ टाउको दुख्दा लापरबाही गर्नाले
५ असार २०७४, सोमबार ११:३०
एजेन्सी, असार ५ ‘कस्तो टाउको दुखिरहेको छ’ भन्ने मानिस हाम्रा वरपर प्रसस्त भेटिन्छन् । सायदै मान्छे होलान् जसको कहिल्यै टाउको नदुखेको होस् । टाउको दुख्नुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कुनै कारण सामान्य हुन्छन् त कुनै जटिल । ‘टाउको…
क्यान्सर बिरामीलाई मनिषाको आर्थिक सहयोग
४ असार २०७४, आईतवार १६:४९
एजेन्सी, असार ४ अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले क्यान्सर बिरामीको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेकी छिन्। अभिनेत्री कोइरालाले क्यान्सर केयर नेपाललाई बिरामीको उपचारमा खर्च गर्न भन्दै एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी हुन्। काठमाडौंमा भएको पाँचौ एनएफडीसी…
ब्रेन डेथ के हो ? जानिराखौं
एजेन्सी, असार ४ रक्तसंचार तथा श्वासप्रश्वास क्रिया पूर्णरुपमा बन्द भएको अवस्थामा परम्परागत रूपमा मानिसलाई मृत घोषणा गरिन्थ्यो । हाल चिकित्सा प्रविधिमा विकास हुँदै गएपछि ‘ब्रेनडेथ’ भएको व्यक्तिमा पनि कृत्रिम प्रक्रियाद्वारा रक्तसंचार तथा…
बुबा बन्न चाहनेहरूले छिटो सुत्नु आवश्यक, किन ? कारण यस्तो छ
३ असार २०७४, शनिबार १०:२१
एजेन्सी, असार ३ चाँडै बुबा बन्न इच्छा राख्नेहरूले ओछ्यानमा पनि छिट्टै जानुपर्ने एउटा अनुसन्धानमा दाबी गरिएको छ । यो अनुसन्धान मेडिकल साइन्स मनिटरमा प्रकाशित छ । उक्त अनुसन्धानका लागि ९ सय ८१ व्यक्तिको सुत्ने अभ्यास गरियो । यसअन्तर्गत ९ सय…
पिसाब किन पोल्छ ? यस्ता छन् कारण
२ असार २०७४, शुक्रबार १५:२४
एजेन्सी, असार २ शरीरमा रहेको अनावश्यक तत्व पिसाब र पसिनाका माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छन् । साधारण अर्थमा मिर्गौलाको माध्यमद्वारा शरीरमा रहेका विकारपदार्थ बाहिर निकाल्ने प्राकृतिक प्रक्रिया पिसाब हो । पिसाब महसुस भएको एक, दुई…
यसरी गर्छ १० सेकेन्डमै धुम्रपानले असर
२ असार २०७४, शुक्रबार १५:०३
एजेन्सी, असार २ ‘स्वास्थ्यका लागि धुम्रपान हानिकारक छ’ भन्ने नारा सबैले सुनेका छन् । तर, धुम्रमानको बेफाइदातर्फ शिक्षित मानिसको पनि ध्यान जान सकेको छैन । मानिसले जतिसुकै सन्तुलित भोजन र शारीरिक व्यायाम गरे पनि यदि उसले धुम्रपान र…
यस्तो कारणले गर्दा मानिस दुब्लाउने गर्छन
२ असार २०७४, शुक्रबार १३:१५
एजेन्सी, असार २ आहा, कस्तो स्लीम शरीर, कसरी त्यस्तो बनाउने होला ? अलिकता मोटो भयो कि मानिसहरु दुब्ला मानिसलाई हेर्दै सोच्ने गर्छन् । तर, दुब्ला मानिसको सोचाई कस्तो होला ? दुब्ला मानिसहरु पनि मोटाहरूलाई हेर्दै त्यस्तै सोच्ने गर्छन्, ‘कसरी…
किन खुइलिन्छ तालु ? जानिराखौं
२ असार २०७४, शुक्रबार १२:३०
एजेन्सी, असार २ तालु खुइलिएका बिषयमा हाम्रो समाजमा अनेकौं किस्सा सुन्न पाइन्छन् । कतिपयले तालु खुइलिनुलाई बुद्धि र विवेकको क्षमतासँग पनि दाँज्ने गरेका छन् । तर, यो वास्तविकता होइन । तालु खुइलिनु पनि एउटा रोग नै हो । खासमा तालु २ प्रकारले…
यस्ता छन् हृदयघातका केहि भ्रम र सत्य
२ असार २०७४, शुक्रबार १२:०४
एजेन्सी, असार २ ह्दयाघात (हर्ट अट्याक) मुटुसंग सम्बन्धित समस्या हो । ह्दयाघात हुँदा मानिसलाई छातीमा प्रचण्ड पीडा महसूस हुन्छ । छाती दुखाई ठूलो ढुंगाले थिचे जस्तो, केही कुराले छातीको वरिपरि बानेको जस्तो प्रकृतिको हुन्छ र दुखाई देब्रे…